मुग्लानी खबर संवाददाता झापा, १८ असोज
बाहुनडाँगीमा एक सयदेखि १० हजार बोटसम्म तेजपत्ता हुर्काएका किसानको सङ्ख्या एक हजारसम्म हुनसक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । तर कति किसानले यसको खेती गरेका छन् र यसबाट के कस्तो लाभ भइरहेको छ भन्ने बारेमा अहिलेसम्म सरकारी तहबाट खोज भएको छैन
बजारनपाएपछि बाख्रालाई घाँस
‘मैले घरेलु प्याकेजिङ उद्योग चलाएर बेच्दै आएको छु,’’ उहाँ भन्नुहुन्छ–‘‘अधिकांश किसानले त्यसो गर्न सक्नुहुन्न, उहाँहरुको तेजपत्ता नबिकेर बाख्रालाई घाँसको रुपमा खुवाइरहनु परेको दुःखलाग्दो अवस्था छ ।’’ दशैँ, तिहार जस्ता चाडबाडका बेला विगतमा तेजपत्ताको माग ह्वात्तै बढ्थ्यो । यसपाली कोभिड–१९ को महामारीका कारण बजार सुस्ताएको हुँदा विगतको जस्तो भारतीय बिचौलियाहरु काँचो तेजपत्ता किन्न घरघरै नआएको स्थानीय किसानहरु बताउँछन् ।
तेजपत्ताको माग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो रहेको हुँदा यसको बजार विदेशमा समेत खोज्न सकिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रदेश नं. १ का अध्यक्ष नरेन्द्र खड्काले बताउनुभयो ।
‘‘झापा, उदयपुरलगायत प्रदेश नंं. १ मा ठूलो मात्रामा उत्पादन भइरहेको तेजपत्ताका बारेमा हाम्रो चासो छ,’’ उहाँले भन्नुभयो–‘‘तर विदेशमा पठाउनु अघि कति मात्रामा, कहाँ कहाँ, कस्तो गुणस्तरको उत्पादन भइरहेको छ भनेर अध्ययनको जरुरी हुन्छ । हामी लगत सङ्कलनको तयारीमा छौँ ।’’
दुबई, कोलकाता, दिल्ली र हैदराबादबाटसमेत यसको नमूना मागिएको उहाँले बताउनुभयो । तेजपत्तालाई कृषि बस्तुको साटो बन पैदावारको रुपमा राज्यले सूचीकृत गरेको हुँदा विदेश निर्यातमा बन कार्यालयको स्वीकृति आवश्यक परेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
हात्ती आतङ्क उग्र बन्दै गएपछि बाहुनडाँगीमा हात्तीले नखाने र किसानलाई फाइदा हुने वैकल्पिक खेतीको रुपमा तेजपत्ता र चिया खेती विस्तार भएको स्थानीय सामाजिक अभियन्ता गोविन्द न्यौपानेले बताउनुभयो ।
अलिअलि गर्दै अहिले ठूलो मात्रामा खेती विस्तार भइसकेको हुँदा सरकारले किसानले उत्पादन गरेको तेजपत्ताको बजारिकरणमा सघाउनु पर्ने उहाँको धारणा छ । किसानले लगाएको धान, मकै, सुपारीलगायतका नगदे बाली भारततर्फबाट आउने हात्तीले सखाप पार्न थालेपछि उनीहरुले विकल्पको रुपमा तेजपत्ताको खेती गर्दै आएका हुन् ।
शुरुका केही वर्ष उत्पादन थोरै थियो र भारतबाट आउने विचौलिया व्यापारीले सबै किनेर लैजान्थे । भारत लगेर उतैको ब्रान्डमा नेपाली तेजपत्ता बजारमा विक्री हुन्थ्यो । रहरले नभएर बाध्यताले शुरु भएको खेती हुनाले यसको बजार प्रवद्र्धनका बारेमा ध्यान पुग्न नसकेको हो । अब करोडको मूल्यमा विक्री हुनसक्ने तेजपत्ता खेर जान नदिन सरकारको समेत ध्यानाकर्षण जरुरी भइसकेको अभियन्ता न्यौपानेले बताउनुभयो ।
घरमै सञ्चालित उहाँको प्याकेजिङ उद्योगमा स्थानीय १५ जना महिलाले रोजगारी पाएका छन् । उद्योगमा मरिच, कागती र तेजपत्ताको प्याकेजिङ हुँदै आएको छ । दशैँको समयमा पाँच हजार केजी तेजपत्ता प्याकेजिङ गरिसक्ने उहाँको योजना छ । छरछिमेकीले उत्पादन गरेको तेजपत्ता समेत किनेर उहाँले प्याकेजिङ गर्नुभएको छ । निकट भविष्यमा तेजपत्ता, बेसार, मरिच, अदुवालगायतका उत्पादन पिसेर धुलो उत्पादन गर्न मिल स्थापना गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रकाशित मिति: आइतवार, आश्विन १८, २०७७, १२:३९:००